Okuthile okulula njengokuhlala nawe | Izincwadi Zamanje
Kubathandi beBlue Jeans siletha izindaba ezimnandi. Ngo-Ephreli 4, kwaqhamuka inoveli eyayikade ilindelwe futhi yagcina esigabeni esithi "Something so simple".
Namuhla ku-Actualidad Literature, sikunikeza isibuyekezo se- le noveli, eqeda, ezenzakalweni nasezenzakalweni ezimbi zabafana ehholo 1B.
Akulula ukuvalelisa kulaba bafana abasenze sabubula futhi sahlupheka kakhulu, kodwa-ke, njengakho konke kulokhu kuphila, kufanele sivale izahluko. IBlue Jeans iyakwazi ukuvalelisa lolu chungechunge ngendlela ebucayi nenempumelelo enkulu.
"Okuthile okulula njengokuba nawe" kuyinoveli egcwele umuzwa, lapho ukukhathazeka nezinkinga zanoma yimuphi umuntu omusha kubonakala, ngaleyo ndlela kwenza umfundi abanjwe kusuka ekhasini lokuqala kuya ekhasini lokugcina.
Ukukhohlisa, ukukhaphela, ukukhwabanisa, izidakamizwa, izinselelo ezingenakwenzeka, ukufa futhi kunjalo, uthando, ubuhlungu. Yonke le mizwa ibonakala kule noveli, kwakha umoya wokungezwani nozwela ukuthi ababhali abambalwa balolu hlobo bazuze.
Labo kini abangazange bakujabulele ukufunda amanoveli amabili adlule bangakhathazeki. IBlue Jeans idalula le ndaba ngombono lapho ungeke ulahlekelwe yimininingwane ethile.
Ngeke siveze okuningi kubalandeli nakubalandeli bochungechunge oluthi "Into elula kangaka ..." Sizokushiyela izinkomba ezincane zalokho ozokuthola.
Ngemuva kokuhamba okungalindelekile kukaManu, kufika izindaba ezivela e-Edinburgh ezizomisa izinwele zezakwabo. Ngaphandle kwemizamo ka-Iria yokukhohlwa ngaye, uthando lungenza konke, futhi-ke owesifazane waseGalician ngeke akuthole kulula ukuyeka imizwa yakhe.
U-Elena uzithola esesiphambanweni phakathi kukadadewabo uMarta noDavid, yize kungengenxa yothando kuphela. Umuntu ongashintsha impilo yakho uzonqamula indlela yakho. Izinqumo ezizothathwa ngu-Elena ngeke zibe lula nakancane.
UToni no-Isa ... Ukuthi "yebo kodwa cha" kuzogcina kungamkhanyisanga uToni, yize ezokwenza okungenakwenzeka ukuthola uthando lwe I-youtuber, ungahle umangale ngomphumela wale ndaba.
U-Ainhoa ​​no -scar babonakala beqinisa ubungani babo, yize ubungani kungeke kube ukuphela kwento emi phakathi kwabo.
UJulen othandekayo kuzofanele abhekane nenye yezinto ezinzima kunazo zonke ezingabhekana nalokhu kuphila. Futhi kuze kufike lapha singabala.
Imininingwane yokugcina ... sinentombazane entsha ehhovisi, noma kunalokho, egumbini uNicole ayekulo. Kepha ... ukubukeka kungenzeka kuyakhohlisa.
Liyini ikusasa labadlali bethu abathandekayo? Ungaphuthelwa lokhu kufundwa. "Okuthile okulula njengokuhlala nawe" wukuqandisa ikhekhe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Into elula njengokuhlala nawe